Umhla My Pet » 5 Iintlobo Yokuqala Daters. Yiyiphi Ngaba?
Kukho inzululwazi ukuba uthandane. Ubomi ukuthandana bafaniswe kwelinge chemistry apho ndiyathemba nomhla wakho ukuncedisana omnye komnye kwaye kungabangela yokutsala ezintle.
Umhla yimpumelelo kuxhomekeke ehambelanayo ye daters. Ke ukwazi oko uhlobo dater wena kunokukunceda ukuba ndibakhuphe ngakumbi iimpawu zakho ezintle ngaphandle kokwaphula ngubani na ngokwenene.
Ngoko ke, uhlobo dater ungathi wena?
Ukuba unguye lincoko phezu-, wena ngaphezu kusenokwenzeka nguqavashe. Ngamanye amaxesha isipho yakho gab ukuchaphazela ngakumbi yokwenza luvo kunye ngaphantsi yokwenza imfuneko ukuthetha. ngamanye amaxesha ukunqunyulwa abantu xa bencokola, kungekhona ngenjongo kunjalo, kwaye unayo na ingxaki ekufumaneni amagama afanelekileyo xa umntu ebuza ukuba ukubaxelela ngawe. Kuya kufuneka ukuba afunde ukumamela kanye njengani ukuthetha. Ufuna ukuqiniseka ukuba nomhla bakho ngokwazana ezinye. Ukwenza oku kuya kukunceda ubone ukuba ezimbini kuhambelane okanye engahambelaniyo.
Nksk. & Mr. thina
Ukufumana umntu kunokuba ngokulinganayo umthandi nomhlobo kubalulekile kule dater kuqala. Wenze le ngongoma kakhulu ngomhla wokuqala. Phambi kokuba ekuzukisekeni ukwazi umhla wakho, ukhawulezisa ukwenza izicwangciso ngomhla wesibini kwaye getaways kunye. Kusenokwenzeka ukuba uqala izivakalisi zakho ezininzi kakhulu "sinako ukuba 'kwaye akwanelanga" mna. "Oku kunoku kunika umhla bakho bacinge ukuba ngunonca okanye ukulawula nokuba ngaba wena kwaye abathabathele uceba uphumo yabo phambi Umkhonzikazi yona izimuncumuncu. Akukho nto iphosakeleyo ukubonisa iimvakalelo zakho sifudukele umhla lakho lokuqala kwinqanaba elilandelayo, nje qinisekisa uqonde ukuba umhla wakho ufuna okufanayo njengoko.
Wena ngokuqinisekileyo oluzimeleyo kwaye akukho mfuneko nabani na okanye nantoni ukugunyazisa ukuba ungubani. Inkululeko yinto ephambili yaye naziphi na izisongelo sifumana lisikiweyo ubomi bakho. Gcina oku engqondweni: xa Wamtyhaphaza amandla kungekho mfuneko nabani okanye mbuna kakhulu, kunokuba turn-off ukuya kumhla wakho. Wonke umntu ufuna ukuba bazive kwezinye umthamo. Ukuba ufuna nje ichanekile kwaye ufuna ukunika umhla bakho bacinge ukuba uya ufuna nanini ngaphezulu ngokukhawuleza, bathi. Umhla lokuqala xesha lifanelekileyo ukubeka zonke izinto phezu kwetafile.
Ukuba olu hlobo dater, sele ukwazi uhlobo lomntu ofuna phantsi kubuhle. Ndilila baye ubomi benu yaququzelelwa kwishedyuli pre-ecetyiweyo iziganeko ebomini ezifana umtshato kids. Phambi ucinga ningambuyisi izicwangciso zakho lomtshato elifanelekileyo ngosuku lwakho lokuqala, ukuvavanya amanzi umhla wakho nikhangele ukuba iinjongo kunye neminqweno yakho asingqinelani. Kunokuba ungakhululeki umntu ukuva ngezinto ezinxulumene ukuzibophelela xa kanye ndifuna umntu ukuya kwimuvi.
The nelingaphindiseliyo Reader
Ifana ummelwane wakho idealist ngasentla, Uyazi ukuba ufuna, kodwa wena isuntswana zigxile ngakumbi ngendlela umhla wakho wenza imali yabo. Niya kuba ingcamango engqongqo ukuba kufuneka agcina xa kufikwa impembelelo yabo imali. Ngubani besebenza okanye kusetyenziswa ukusebenzela koko abumbe imbono yakho bangobani. Ukwazi uhlobo lomntu ofuna xa kufikwa kuzo zonke iinkalo zobomi inkulu. Makhe sithathe ndikhululeke kwimihla nabantu nabangazanelisiyo ngokupheleleyo indlela yakho. Usenokuba ukumangaliswa ukuba kuwa ngenxa umntu okungalungelaniyo iinjongo zakho, iyenzeka.
Kutheni Girls Tall Umhla Guys emifutshane